Mahitsy sy Ankazobe : sarona ireo enin-dahy nisandoka ho zandary sy mpanao fanafihana | NewsMada
Mahitsy sy Ankazobe : sarona ireo enin-dahy nisandoka ho zandary sy mpanao fanafihana
Sarona ihany rehefa nokarohina ireo jiolahy mpanafika amin’iny Mahitsy sy ny manodidina iny. Misandoka ho zandary ireo rehefa manafika, ary tratra tany aminy ny fanamiana zandary maromaro…
Enin-dahy no voasambotry ny zandary tany Mahitsy sy Ankazobe ny zoma lasa teo. Voalazan’ny zandary fa misandoka ho zandary izy ireto rehefa manafika. Nahatrarana fanamiana zandary, satroka sy fanamiana fitondra miady tany amin’izy ireo, niampy antsy sy ody gasy. Ny 17 mey teo ireo nanao fanafihana tany Antanetibe Mahazaza Mahitsy ireo ka vola 100.000 Ar no azony tamin’izany. Nisy ny fanapoahana basy nataon’ireo olon-dratsy tamin’izany. Rehefa nanao ny fanenjehana ny mpitandro filaminana, nahatratra olona roa. Ireo indray avy eo no nanoro ny namany, ka tratra tany Ankazobe ny telo, ny zoma teo.
Mbola miriaria any ireo mitondra basy, izay mbola tsy tratra fa tafatsoaka. Eo am-pikarohana azy ireo ny mpitandro filaminana.
Amin’ny ankapobeny, manao andiany iray hatrany ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana eto amintsika. Efa misy faritra iasan’izy ireo, ka izay no antony nahamora ny fisamborana ireo tratra ireo.
Azo heverina koa anefa fa ireo andian-jiolahy mpanafika eny amin’ny faritr’i Mahitsy sy ny manodidina ihany no manafika amin’ny faritra hafa, saingy tsy miala amin’ny tanàna mifanakaikikaiky izy ireo, satria efa voafehiny izany ary mora amin’ireo mpiray tsikombakomba aminy ny fanoroana izay hotafihina.
Manao ny ezaka rehetra ny zandary amin’ny ady amin’ny asan-jiolahy, kanefa miantso ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona hatrany izy ireo amin’ny fanomezam-baovao momba ireny jiolahy na andian’olona mampiahiahy ireny. Natolotra ny fampanoavana, omaly, ireo jiolahy.